Ciidamada Somaliland oo saacado kooban la wareegay degaanka Boocame ee gobolka Sool – Puntland Post
Posted on January 24, 2020 January 24, 2020 by CCC
Ciidamada Somaliland oo saacado kooban la wareegay degaanka Boocame ee gobolka Sool
Ciidamada Somaliland, ayaa maanta saacado kooban la wareegay degaanka Boocame ee gobolkaa Sool, halkaasi oo ay horay u joogeen ciidamo u dhashay degaanka oo taageersan Somaliland.
Ciidamada Somaliland oo ku hubaysan gaadiidka dagaalka, ayaa saaka gudaha u galay degaanka Boocame ee gobolkaasi Sool, inkastoo markii dambe ay dib uga baxeen, sida ay soo weriyeen goob-joogayaal kala duwan.
Warar hoose oo ay heshay Puntland Post, ayaa sheegaya in dhacdadaasi aysan la xiriirin xiisad u dhexaysa Puntland iyo Somaliland, balse ay ahayd xeelad warbaahinta looga mashquulinayo muran ka dhex jira Taliska ciidamada Somaliland ee GOOJA-CADDE, kaasi oo ka dhashay sarkaal la xiray.
Tan iyo markii uu saaka soo baxay warka sheegaya in Somaliland la wareegtay degaanka Boocame, waxa baraha bulshada qabsaday warkaasi, waxaana yaraaday hadal-haynta muran laga soo sheegayay Taliska ciidamada Somaliland ee GOOJA-CADDE.
Dhinaca kale, Puntland ayaan ilaa iyo hadda wax war ah ka soo saarin tallaabada ay qaadeen ciidamada Somaliland eek u sugan gobolka Sool.